Hetsika sahisahy nataon'i London Heathrow hampihenana ny fandefasana fiara
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Hetsika sahisahy nataon'i London Heathrow hampihenana ny fandefasana fiara
London Heathrow dia nanambara fa efa vonona ny hampiditra andiany fepetra vaovao henjana hiarovana ny kalitaon'ny rivotra eo an-toerana, hampihena ny fitohanana sy ny famoahana emissions, satria ny seranam-piaramanidina dia mbola mampiasa ny refy ao aminy hamahana ireo olan'ny tontolo iainana.
Ny seranam-piaramanidina tokana ao Angletera dia mametraka drafitra hampidirana ny sarany ho an'ny fiara mpandeha sy ny fiara fanofana tsy miankina rehetra. Tafiditra ao anatin'izany ny seranam-piaramanidina Ultra Low Emission Zone (heathrow ULEZ) voalohany eran-tany, natomboka hampidirina amin'ny 2022. Ny Heathrow ULEZ dia hampiditra fenitra fandefasana fiara farany ambany mitovy amin'ny ULEZ ben'ny Tanànan'i Londres ho an'ny fiara mpandeha sy fiara manakarama tsy miankina miditra amin'ny toeram-piantsonan'ny fiara na midina. -ny faritra any amin'ny terminal any Heathrow, 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro. Rehefa mandeha ny fotoana miaraka amin'ny fisokafan'ny lalamby vaovao manomboka amin'ny 2026 sy ny fanatsarana ny fahazoana fitateram-bahoaka mankany amin'ny seranam-piara-manidina, ny Heathrow ULEZ dia hivadika ho fiampangana ny fidirana amin'ny fiara (VAC) amin'ny fiara mpandeha rehetra, taxi ary fiara tsy manakarama tsy miankina izay tonga any amin'ny valan-javaboary na midina. -tsy faritra. Ny tanjona dia ny hifehezana ny loharanom-pahalotoan'ny rivotra maloto ao an-toerana - fiara fitaterana an-dàlana - ary hampihenana ny fitohanan'ny olona amin'ny alàlan'ny famporisihana olona maro kokoa hampiasa fomba maharitra hidina sy hivoaka ny seranam-piaramanidina.
Ny tolo-kevitra voalohany ho an'ny Heathrow ULEZ dia mety hametraka ny sarany eo anelanelan'ny £ 10-15, mifanaraka amin'ny fiampangana napetraky ny Ben'ny tanàna tao afovoan'i Londres. Ny antsipiriany marina momba ny Heathrow ULEZ dia hohamarinina rehefa mandefa ny fangatahana DCO farany ho fanitarana i Heathrow aorian'ny fakan-kevitra ataon'ny besinimaro. Ny vola azo avy amin'ireo tetik'asa roa ireo dia hanampy amin'ny famatsiam-bola amin'ny fandraisana andraikitra hanatsarana ny fitaterana maharitra, handray anjara amin'ny fanonerana ny vondrom-piarahamonina ary hanampy amin'ny fitazonana ny sarany amin'ny seranam-piaramanidina rehefa mivelatra ny seranam-piaramanidina.
Ny fanambarana androany dia tonga amin'ny fotoana ilana hetsika mba hiarovana ny kalitaon'ny rivotra eo an-toerana amin'ny alàlan'ny fanovana ny indostria sy ny fihetsiky ny daholobe. Heathrow izao dia hanatevin-daharana an'i London sy Birmingham ho faritra fahatelo UK izay mametraka fiampangana amin'ireo fiara mandoto indrindra.
Ankoatr'izay, i Heathrow dia manao izay kely indrindra hampihenana ny fampiasana fiara amin'ny alàlan'ny fanovana indostrialy amin'ny alàlan'ny tetikady Colleague Strategy izay hapetraka amin'ny herinandro ambony ary hifantoka amin'ny fampihenana be ny isan'ireo fitsangatsanganana fiara mpiara-miasa amin'ny alàlan'ny fifangaroana fandrisihana, famerana ny fijanonana ary ny fampiasam-bola. amin'ny rohy fitateram-bahoaka vaovao. Nanam-bola mihoatra ny £ 1 tapitrisa tapitrisa amin'ny fotodrafitrasa an-dalamby ny seranam-piaramanidina ary manome mihoatra ny £ 2.5 tapitrisa isan-taona mba hampirisihana ny fampiasana fitateram-bahoaka amin'ny alàlan'ny zotram-pitaterana maimaimpoana amin'ny seranam-piaramanidina, fanampiana ny serivisy fitaterana bus ary fandraisana anjara amin'ny drafi-pitaterana maharitra eo an-toerana.
Amin'izao fotoana izao ny seranam-piaramanidina mifandray tsara indrindra any Angletera, Heathrow dia manohana tanteraka ny drafitra hanitsahana ny fahafahan'ny lalamby amin'ny taona 2040 amin'ny alàlan'ny rohy fitaterana nohatsaraina izay manisy fiheverana ny fampidirana ny Elizabeth Line, ny Piccadilly Line nohavaozina, ary ny tolo-kevitry ny lalamby avy any Andrefana sy atsimo. .
Tamin'ny voalohandohan'ity volana ity dia namoaka ny tatitry ny paikady fitohanana isan-taona koa i Heathrow - Heathrow 2.0 - izay mamaritra ny fomba fandraisan'ny seranam-piaramanidina ny fiantraikan'ny fiaramanidina sy ny asa hafa. Misongadina ao anatin'ity tatitra ity ny famatsiam-bola lehibe natao mba hanonerana ny fandefasana entona sy hanafainganana ny sidina mandeha amin'ny herinaratra, manohana ny tanjon'ny seranam-piaramanidina ho tonga tsy miandany amin'ny karbaona amin'ny taona 2020 ary hiasa amin'ny fotodrafitrasa seranam-piaramanidina zero hatramin'ny 2050. Ny fandraisana andraikitra dia misy tetik'asa hamerenana amin'ny laoniny ny tantsaha UK mba hamerenana ny fandefasan'ny gazy karbonika, fiara elektrika marobe sy teboka fihenam-bidy, fampiasam-bola amin'ny famolavolana solika maharitra, fampanantenan-tena hanafoana ny saram-pitoriana mandritra ny herintaona ho an'ny fiaramanidina elektrika na hybrid voalohany napetraka ao amin'ny serivisy mahazatra any Heathrow, miaraka amin'ny fikarohana momba ny fotodrafitrasa ho avy hanohanana ny fiaramanidina elektrika sy ny teknolojia.
Heathrow Chief Executive John Holland-Kaye nilaza hoe:
"Ny heathrow Expansion dia tsy safidy eo amin'ny toekarena sy ny tontolo iainana - tsy maintsy manolotra azy roa isika. Ny fanambarana androany dia mampiseho fa handray ny fanapahan-kevitra hentitra izahay mba hahazoana antoka fa hitombo ny andraikiny amin'ny seranam-piara-manidina. ”
Ben'ny tanàna lefitra misahana ny fitaterana any Londres teo aloha ary ny talen'ny Forum momba ny faritra fitaterana Heathrow tsy miankina, Val Shawcross, dia nilaza hoe:
“Fiovana lehibe iray amin'ny ezaka ataon'i Heathrow hanadiovana ny fahalotoan'ny rivotra eny an-toerana amin'ny alàlan'ny fanovana ny olona ho amin'ny fomba fitaterana madio indrindra. Tsy mbola nanintona ny totohondry niresaka tamin'ny seranam-piaramanidina momba ny kalitaon'ny rivotra eo an-toerana aho ary antenaiko ny hanohy hitana an'i Heathrow amin'ny andraikidiko mahaleo tena vaovao amin'ny maha talen'ny Forum Heathrow Area Transport Forum ahy. "
Heathrow dia hanontany momba ny tolo-kevitra momba ny paikadim-pidirana amboniny, ao anatin'izany i Heathrow ULEZ sy Heathrow VAC, amin'ny dinika iray momba ny drafitra masterplan tian-kano hatao amin'ny 18 Jona. Ny besinimaro dia hanana fotoana hanomezana valiny momba ny tolo-kevitsika ao anatin'ity consultation ity.
Na dia kasaina hitombo aza ny fangatahana fiaramanidina iraisampirenena mandritra ny am-polony taona ho avy, dia hampiasa ny toeran'ny mpitarika i Heathrow hiantohana ny fitomboana amin'ny fomba tompon'andraikitra sy maharitra ao amin'ny seranam-piaramanidina hany onenan'i UK. Ny drafitra hanitarana an'i Heathrow dia misy ny fanoloran-tena tsy hamotsotra fahafaha-manao fanampiny ao amin'ny seranam-piaramanidina raha toa ka hiteraka fanitsakitsahana ny adidin'ny kalitaon'ny rivotra any Angletera izany. Heathrow dia nanolo-tena hiantohana ny fanitarana tsy hisy fiatraikany amin'ny fahafahan'ny UK hanatratra ny tanjon'ny fihenan'ny karbaona.